You are here: Home somal Coach Jama Aden (Karaiin) Records Dunida iyo Billadihii SOPOT
Waxaa bishii hore ee February ay noqotay markii ugu horreeysay ee orodada caalamigaa uu orodyahan JEBIYO 3 rekoordh laba wiig gudahood. Taariikhdanna waxaa hawl yareeyey orodyahannada da’ada yare e Genzeba Debaba iyo tabaraheeda caankaa ee Jama Aden. Waxaa Genzeba ay record kii ugu horreeyey ku jebisay orodkii Ciyaaraha orodada Deddan ee IAAF Indoor Games ee lagu qabtay Karlsruhu, Germany orodka 1500m.
Waxaa Dibaba ay ku oroday saacad ah 3:55.17,halka uu ahaa rekorkii ay jebisay 3:58.28 kaas oo ay dhigtay ciyaartoygoo Russia ee Yelena Soboleva sannadkii 2006. Waxay Dibaba jebisay wiigii xigay Rekorkii orodka 3000m ee lagu qabtay XL Galan Stockholm, Sweden. Iyadoo ku qaaday orodkaa 3000m saacadda 8:16.60. Waxaa isla wiigii ku xigay ay Dibaba ay Rekordhkii seddexaad ku jebisay orodkii caalamiga ahaa ee Birmingham Indoor Grand Prix ee waddanka Ingirriska. Waxay halkaa mar seddexaad samaysay rekorka orodka 3000m saacadda ah 9:00.48. Dibaba ayaa halkaa ku noqotay ciyaarhankii ugu horreeyey ee saddex rekordh wada jebisa kuwaas oo aha rikoodho caamali ah oo aan si hawl yar loo jebin.
Waxaa isla markaa bar bar socday natiijooyinkaa uu Tababare Jama Aden ka dambeeyey, kuwa kale oo ay ciyaaryahanada caalamiga ee uu tababaraayey ay sameeyeen. Waxaa ka mid ahaa guushii Rekordhkii cusbaa ee uu sameeyey ordoyahanka Morocco ee Mohamed Moustaoui ee 1500m, isagoo ku orday saacadda 3:35.0 kaas oo noqday rekorrdhii afaraad ee Jama aden ay kooxdiisu la timaaddo. Waxaa isna door weyn kaciyaaray dhankiisaa Ciyaaryahanka Musaeb Balla ee Qatar oo qaaday billadda dahabka ee Asia orodka800m isagoo ku orday 1:46.82 kaasoo ahaa saacadda ugu wanaagsan ee uu ebid ku orday.
Waxaa la soo gaadhay bishan March horraanteedii Ciyaarihii IAAF World Indoor Championships lagu qabaneyey Waddanka Poland, magaalada SOPOT. Halkaas oo ahay goob lagu ballamay oo orodyahan walba oo u qalmaa uu u hanqal taageyey. Waa Ordkii Garoonka deddan ee billadaha lagu kala qaadayey. Waxaa ka soo qayb galay orodyahannada ugu caansan, uguna saacaddaha wanaagsan ee waddama adduunka oo idil. Waxaa sigaar ah farta loogu fiiqayey, lana sugayey ciyaaryahannada tababare Jama Aden, ama sida caalamaka ciyaaraha fudud ay u yaqaanaanba Coach Aden International Team. Waxa aad ugu dheeraaday ka faalloodka, iyo saadaalinta kooxdan saxaafadda ciyaaraha adduunka, iyo dadka xiiseeya orodadda. Waxaa halkaa ka billoowday isreeb reebkii ama heatatkii waxaana aakhirkii isku soo hadhay ciyaaryahanno ka soo gudbay isreebreebkii una qalma billadaha meesha lagu loolamayey. Waxaa kamid ahaa koodxa Jama Aden oo billadaha 1500m, iyo 3000m ugu soo hadhay Oroyahanka Genzeba Debaba, iyo Ayanleh Souleiman oo ah ninka dadka ka faallooda orodada ay yidhaahdeen inuu baahi dheeraad ah u qabo Billadda Dahabkaa oo aanay cida ka hortaagan aanay jirin markay eegeen heerarka kala duwan ee uu soo dhaafay.
Waxaa aakhirkii guushii ugu weynayday ee uu Tababare ka helo gaadhay ciyaarahan, tababare Jama Aden oo kooxdiisii ay qaateen labadii billadood ee Dahabkaa ee 3000m, iyo 1500m. Waxaa Ayanleh halkaa ka muujieyey xirfaddo gaar ah oo ku tusinaaya hogaaminta orodka (tactics), kuna salaysnaa habka tababrkii uu markaa ku soo dhaqmay. Waxaa uu ku badiyey saacadda 3:37.52 orodkii 1500m oo billaddii Dahabka ee ugu horreeysay u hantiyey waddankiisa Djibouti. Waxaa sidoo kale biladdii dahabka 3000m ee dumarka si farshaxan leh ku habtiday Genzeba Dibaba. Waxay gabadhani si adag uga hadashay heerka weyn iyo isbedelka sare eeku yimid orordkeeda muddadii ay u soo wareegtay Tababarka Jama Aden. Waxaa maanta aad loola yaabanyey sida xawligaa ee uu tababrahan Jama Aden uu usoo saarayo dhallin ka midaysan hirfado aan looga baran orodada masaafada dhexe ee caalamka.